Abathandi Benkululeko Bahlanganisana Kumbhiyozo WeArmada Ngo-2013—ERouen, EFransi
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBislama IsiChichewa IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChol IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGalician IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKabyle IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiKrio IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMingrelian IsiNahuatl (saseCentral) IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTahiti IsiTajiki IsiTarascan IsiTelugu IsiThai IsiTojolabal IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUzbek IsiValencian IsiWelsh IsiXhosa IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu isiWallisian
Abathandi Benkululeko Bahlanganisana Kumbhiyozo WeArmada
NgoJuni 6-16, 2013, iindwendwe ezininzi ezisuka kumazwe ahlukahlukeneyo ziye zathontelana kwizibuko laseRouen, elikumntla weFransi, ukuze zibekho kowona mboniso mhle owenzelwa ngaselunxwemeni, wombhiyozo weArmada.
Emva kokuhamba iikhilomitha eziyi-120 zinyuka uMlambo iSeine okummandla omhle waseNormandy, ezona nqanawa zintle nezithandwayo ehlabathini lonke ziye zathoba iiankile zazo kulo mmandla walo mbhiyozo. Kangangeentsuku ezingaphezu kweziyi-10, iindwendwe bezinethuba elikhethekileyo lokukhwela kwezi nqanawa zimalunga neziyi-45 ngaphandle kwentlawulo zize zizibuke.
Yinton’ ebangele abantu abaneminyaka eyahlukahlukeneyo ukuba babekho kumbhiyozo weArmada? Ngokutsho komququzeleli walo mbhiyozo, iArmada ivula ithuba lokuba abantu “basondelelane nezi nqanawakazi zinkulu ezibenza bacinge izinto ezintle.” Kubantu abaninzi, abadala nabancinane, iinqanawa ezinkulu zibenza bacinge ngohambo olude nangenkululeko.
Iindwendwe ezingamawaka-waka ziye zafumana ithuba lokuva ngolunye uhlobo lwenkululeko, yona isekelwe kwiinyaniso eziseBhayibhileni. (Yohane 8:31, 32) Njengokuba iindwendwe zibuka esi sixeko samandulo nezitrato zaso ezixineneyo, bezibona iinqwelo ezinoncwadi ezisetyenziswa ngamaNgqina kaYehova. Ngoko xa oomatiloshe okanye iindwendwe zisiya ngakwenye yezi nqwelo, bezinikwa iincwadi ezisekelwe eBhayibhileni ngaphandle kwentlawulo. Abantu abaninzi bebesiba nomdla kwinqaku elikwiMboniselo elithi, “Ihlabathi Elingenalucalucalulo—Liza Kubakho Nini?” ibe bebemenywa ukuba baye kuphulaphula intetho esekelwe eBhayibhileni ngesiFrentshi, ngesiNgesi okanye ngeSpanish.
Abantu balo mmandla baye babulela kakhulu ngokushumayela kwamaNgqina. Enye indoda ibimangalisiwe kukubona amaNgqina emi ngakwinqwelo yawo eneencwadi iye yathi: “Ndiyakuvuyela ukunibona nisesitratweni. Ndiyabahlonela abantu abazimelayo izinto abazikholelwayo nangona singakholelwa kwizinto ezifanayo.” Abanye ooTamkhulu ababini abadibana namaNgqina aselula eshumayela esitratweni bathi: “Kufuneka nizidle ngenxa yeenkolelo zenu!”
Luza Kuphela Nini Ucalucalulo Emhlabeni?
Imizekelo yokoqobo ibonisa indlela iBhayibhile ebanceda ngayo abantu beyeke ukuba nocalucalulo. Luya kupheliswa nini ngokupheleleyo?
Kwenziwa Into Entsha EManhattan
Iintlanganiso Zebandla ZamaNgqina KaYehova